Ama-Hawks aphetha iviki eliphithizelayo ngokushanela i-KwaZulu-Natali | Scrolla Izindaba
Ama-Hawks aphetha iviki eliphithizelayo ngokushanela i-KwaZulu-Natali
Ama-Hawks avale iviki eliphithizelayo ngokubopha abantu abane eKwaZulu-Natali ngoLwesihlanu, kubalwa isikhulu ehhovisi likaNdunankulu uSihle Zikalala, ngokukhwabanisa amathenda ngaphambi kokuntwela kokusa.
Oyi menenja ye-supply chain uNonhlanhla Hlongwa uboshwe nabanye osomabhizinisi abathathu eMgungundlovu. Bathweswe icala elibandakanya amathenda okuhlinzeka ukudla angabalelwa kwimali eyizigidi eziyi-R20 phakathi kowezi-2016 kanye nowezi-2017.
Okhulumela ama-Hawks uSimphiwe Mhlongo ukuqinisekisile ukuboshwa kwalezi zikhulu, waphinda washo futhi ukuthi bakhishwe ngebheyili.
Yikhona lokhu okwenzakalile kamuva kuleli viki ebeliphithizele lokulwa nokukhwabanisa:
NgoLwesithathu ama-Hawks abophe izibalo eziyisikhombisa ezibalulekile kubalwa nosomabhizinisi uEdwin Sodi, osolwa ngokukhwabanisa imali eyizigidi eziyi-R255 kuhulumeni wase-Free State.
NgoLwesine, ekuseni owayeyi-ANC MP uVincent Smith uvele enkantolo yemantshi yase-Palm Ridge ngecala lokukhwabanisa kanye nelenkohlakalo. Kodwa yena uthe akanalo icala.
NgoLwesihlanu, uThoshan Panday, owayesebenza nowayenguMengameli uJacob Zuma, uthweswe icala lokukhwabanisa, inkohlakalo kanye nokufoja amathenda okunikeza amaphoyisa indawo yokuhlala ngenkathi kunendebe yomhlaba kowezi-2010. Oboshwe kanye naye ngukhomishana wamaphoyisa uMmamonnye Ngobeni.
I-The Mail and Guardian ibike ngoLwesihlanu ukuthi ama-Hawks aselungele ukubopha osopolitiki base-Limpopo be-ANC ngokuphanga i-VBS ebhange le-Mutual.